Cabdi Qeybdiid Oo Dhaliilay Shirki Garowe. – SBC
Cabdi Qeybdiid Oo Dhaliilay Shirki Garowe.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) ayaa ku gacan sayray natiijada kasoo baxday shirkii ay magaalada Garoowe ku yeesheen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul-goboleedyada dalka.
Cabdi Qaybdiid oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in go’aanka kasoo baxay shirkaasi uusan waafaqsanayn dastuurka u degsan dalka.
Wuxuu tilmaamay in shirku ahaa mid lagu carqaladaynayo shirka maamulka loogu dhisayo bulshooyinka gobollada Mudug iyo Galgaduud iyo gabi ahaanba mustaqbalkooda, sidaa darteedna aan la aqbali karin natiijada kasoo baxday.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamullada Puntland, Konfur-galbeed iyo Jubba ayaa shir wadatashi ah oo saddex maalmood uga socday magaalada Garoowe waxay shalay kasoo saareen war-murtiyeed ka kooban toddoba qodob oo uu ku jiro in maamulka lagu dhisayo magaalada Cadaado uu ka kobnaan doono gobolka Galgaduud iyo qaybta Koonfureed ee gobolka Mudug.